Quduus, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Qudduusku waa ficil nimcadiisa oo Ilaah ku rumaysto rumeeyaha iyo karaamada cibaado ee Ciise Masiix ee rumaystehu ku lug leeyahay. Quduusnimada waxaa lagu soo qaatay rumaysadka xagga Ciise Masiix waxaana lagu sameeyaa jiritaanka Ruuxa Quduuska ah ee dadka. (Rooma 6,11:1; 1,8 Yooxanaa 9: 6,22-2; Rooma 2,13:5; 22 Tesaloniika 23; Galatiya,)
Sida ku xusan qaamuuska 'Concise Oxford Dictionary', quduuska waxaa loola jeedaa "in wax la kala sooco ama la dhigo wax qoduus ah", ama "in la nadiifiyo ama laga xoreeyo dembiga". 1 Qeexitaanadan ayaa ka tarjumaya xaqiiqada ah in Kitaabka Quduuska ah uu ereyga "qoduus" u adeegsanayo laba qaab: 1) xaalad gaar ah, taas oo ah, in loo kala sooco adeegsiga Ilaah, iyo 2) akhlaaqda suuban - fikradaha iyo ficilada waxay la mid yihiin xaalad muqadas ah, Fikradaha iyo ficillada ku habboon Jidka Eebbe. 2
Waa Eebbe dadkiisa daahiriyaa. Isaga ayaa u kala soocaya ujeeddadiisa, oo isaguna waa kan xoojiya akhlaaqda quduuska ah. Khilaafaad yar baa ka jira qodobka koowaad ee ah in Eebbe dadka u kala saaro ujeedkiisa. Laakiin waxaa jira muran ku saabsan is dhexgalka u dhexeeya Ilaah iyo ninka oo la yimaada dabeecadda daahirintiisa.
Su'aalaha waxaa ka mid ah: Waa maxay doorka firfircoon ee ay Masiixiyiintu ka cayaaraan quduusnaanta? Ilaa heerkee ayay Masiixiyiintu ka filayaan inay ku guuleystaan ​​iskuhalka fikirkooda iyo ficilkooda heerka ilaahiga ah? Sidee ayay Kaniisaddu u dhiirrigelinaysaa xubnaheeda?
Waxaan soo bandhigi doonaa qodobbada soo socda:
Isdaahirinta waxaa lagu suurta geliyay nimcada Ilaah.
Masiixiyiintu waa inay isku dayaan inay fikradahooda iyo ficilkooda ku diraan doonista Ilaah sida ku cad Kitaabka Quduuska ah.
Qudduusku waa koritaan horumar leh iyadoo laga jawaabayo doonista Ilaah. Aynu ka wada hadalno sida daahirinta loo bilaabo.
Daahirinta bilowga ah
Dadku waa akhlaaq xumo mana dooran karaan Eebbe kaligiis. Dib-u-heshiisiinta waa in uu bilaabaa ilaahay. Dhexgalka Eebbe ee nimcada leh ayaa loo baahan yahay ka hor inta qofku aanu iimaan yeelan oo Ilaah u noqon. Haddii nimcadan aan la xakamayn karin waa mid muran badan leh, laakiin Orthodoxy-ku waxay oggol tahay in Eebbe doorto. Wuxuu dadka u doortaa ujeedkiisa sidaas darteedna iyaga ayuu quduus uga dhigayaa ama u xushaa dadka kale. Waqtiyadii hore, Ilaah wuxuu quduus ka dhigay reer binu Israa'iil, oo dadkaas dhexdeeda wuxuu sii waday inuu sii daayo reer Laawi (tus. Laawiyiintii 3:20,26; 21,6; Sharciga Kunoqoshadiisa 5). Wuxuu u kala saaray ujeedkiisa. 3
Si kastaba ha noqotee, Masiixiyiintu si gaar ah ayaa loogu xusaa sidan: "Qoduus laga dhigay Ciise Masiix" (1 Korintos 1,2). “Waxaa mar keliya quduus laga dhigay siifiddii jidhka Ciise Masiix" (Cibraaniyada 10,10). 4 Masiixiyiinta waxaa lagu daahiriyaa dhiigga Ciise (Cibraaniyada 10,29; 12,12). Waxaa lagu dhawaaqay inay muqadas yihiin (1 Butros 2,5: 9,) waxaana loogu yeeraa "quduusiin" Axdiga Cusub dhexdiisa. Taasi waa xaaladdooda. Isdaahirinta ugu horreysa waa caddeyn (1 Korintos 6,11). «Ilaah ayaa markii uguhoreeyey kuu doortay inaad ku mutaysato Quduusnaanta Quduusnimada Ruuxa ah» (2 Tesaloniika 2,13).
Laakiin ujeedada Eebbe ee dadkiisa ayaa dhaafaysa sheegasho fudud oo ah xaalad cusub - waa mid kaligeed adeegsaneysa, adeegsiguna wuxuu ku lug leeyahay is beddel xagga akhlaaqda ah oo dadkiisa ah. Dadka waxaa loo xushay ... inay adeecaan Ciise Masiix " (1 Butros 1,2). Iyaga waa in loo badalaa muuqaalka ciise masiix (2 Korintos 3,18). Ma aha oo kaliya in loo caddeeyo inay quduus yihiin oo xaq yihiin, iyaguna way dhalan doonaan. Nolosha cusubi waxay bilaabmaysaa inay horumariso, nolol u baahan inay u dhaqanto xurmo iyo caddaalad. Markaa, isdaahirinta bilowgeedu waxay horseedda u daahirinta dhaqanka.
Xitaa Axdigii Hore, Ilaah wuxuu u sheegay dadkiisa in heerka muqaddaskooda ay ku jiraan isbeddel xagga dabeecadda ah. Reer Banii Israa’iil waa inay ka fogaadaan nijaas ahaan maxaa yeelay Ilaah baa iyaga doortay (Deut 5). Xaalkooda quduuska ah waxay kuxirantahay addeecadooda (Deut 5). Wadaadadu waa in ay cafiyaan khaladaadka qaarkood maxaa yeelay waa qoduus (Bilowgii 3: 21,6-7). Caadiyeyaashu waxay ku qasbanaadeen inay beddelaan dhaqankooda inta ay heesanayaan (Bilowgii 4:6,5).
Doorashadeenna Masiixa waxay ku leedahay saameyn anshaxeed. Tan iyo markii Saint noo yeeray, Masiixiyiinta waxaa lagu waaniyay “inay qoduus ku ahaadaan wixii isbeddela ah oo dhan” (1 Butros 1,15: 16). Haddii aan nahay dadka Ilaah doortay iyo quduusiinta, waa inaan tusno naxariis diiran, naxariis, is-hoosaysiin, qabow iyo dulqaad (Kolosay 3,12).
Dembiga iyo nijaas kama aha dadka Ilaahay (Efesos 5,3; 2. Tesaloniika 4,3). Markii dadku is nadiifiyaan mashaariicda ceebta ah, waa “kuwo qoduus ah” (2 Timoteyos 2,21). Waa inaan ku xakameynaa jirkeena qaab muqadas ah (2 Tesaloniika 4,4). "Quduuska ah" badanaa waxaa lala xiriiriyaa "mid aan eed lahayn" (Efesos 1,4; 5,27; 2 Tesaloniika 2,10; 3,13; 5,23; Tiitos 1,8). Masiixiyiinta waxaa 'loogu yeedhay inay quduus ahaadaan' (1 Korintos 1,2) "In la sameeyo isbedel quduus ah" (2 Tesaloniika 4,7: 2; 1,9 Timoteyos 2: 3,11; Butros). Waxaa nala faray inaan "eryano quduusnaanta" (Cibraaniyada 12,14). Waxaa naloo sheegay inaan daahir nahay (Rooma 12,1), waxaa naloo sheegay in "aan quduus ka nahay" (Cibraaniyada 2,11:10,14;), waxaana nalagu dhiirrigeliyay inaan sii wadno quduusnimada (Muujintii 22,11). Waxaa inaga dhigay quduus xagga shaqada Masiixa iyo joogitaanka Ruuxa Quduuska ah ee dhexdeena ku jira. Gudaha ayey naga beddelaysaa.
Daraasaddan gaagaaban ee eraygu waxay muujineysaa in quduusnimada iyo qoduusnimadu ay wax ka leeyihiin dhaqanka. Ilaah wuxuu dadka u kala soocayaa kuwo "quduus ah" ujeeddo ahaan si loogu noolaado nolol quduus ah oo raacda Masiixa. Waa nala badbaadiyey si aan u soo saarno camal wanaagsan iyo miro wanaagsan (Efesos 2,8-10; Galatiya 5,22-23). Shaqooyinka wanaagsan maahan sababta badbaadada, laakiin waa natiijada ka dhalanaysa.
Shaqooyinka wanaagsan ayaa caddeyn u ah in qofku aaminaadkiisu dhab yahay (Yacquub 2,18). Bawlos wuxuu ka hadlayaa "addeecidda rumaysadka" oo sheegaya in iimaanka lagu muujiyo jacayl (Rooma 1,5; Galatiya 5,6).
Koriinka cimriga dheer
Markay dadku rumaystaan ​​Masiixa, iyagu kamaamil qabaan rumaysadka, jacaylka, shaqooyinka, ama dhaqanka. Bawlos wuxuu ugu yeedhay Korintos kuwo walaalo ah iyo walaalo, laakiin waxay leeyihiin dembiyo badan noloshooda. Talada badan ee ku jirta Axdiga Cusub waxay muujineysaa in aqristayaasha aysan ubaahneyn oo keliya tilmaamaha caqiido ahaan, laakiin sidoo kale waano dabeecadeed. Ruuxa Quduuska ahi wuu na beddelaa, laakiin ma xakameynayo rabitaanka aadanaha; Nolosha qudduusku si toos ah ugama soo baxdo iimaanka. Masiixi kasta waa inuu sameeyaa go'aanno ku saabsan inuu sameeyo wax saxan ama khalad ah, xitaa Masiixu wuxuu ka shaqeynayaa inuu beddelo hamigeenna.
"Is-jirkii hore" ayaa laga yaabaa inuu dhinto, laakiin Masiixiyiintu sidoo kale waa inay hoos dhigaan (Rooma 6,6-7; Efesos 4,22). Waa inaan sii wadnaa dilalka shaqooyinka jidhka, hadhaagii naftii hore (Rooma 8,13; Kolosay 3,5). In kasta oo aan u dhimanay dembiga, haddana dembigu wali waa nagu dhex jiraa oo waa inaanan u oggolaan (Rooma 6,11-13). Fikradaha, shucuurta iyo go’aamada waa in si miyir leh loogu qaabeeyaa qaab waafaqsan rabbaaniga. Quduusnimadu waa wax la eryanayo (Cibraaniyada 12,14).
Waxaa naloo sheegay inaan kaamil nahay oo aan jeclaano qalbiyadeena oo dhan (Matayos 5,48;
22,37). Sababo la xiriira xaddidaadda jidhka iyo hadhaagii is-qadiimka, ma awoodno inaan tan u dhammaystirno. Xitaa Wesley, oo si geesinimo leh uga hadlay "kaamilnimo", wuxuu sheegay in uusan ula jeedin maqnaanshaha dhammaystir la’aanta. 5 Kobaca marwalba waa macquul waana la amraa. Haddii qofku leeyahay jacayl Masiixi ah, isagu ama iyadu waxay ku dadaali doontaa inay bartaan sida si fiican loogu muujiyo, iyadoo khaladaad yar ay jiraan.
Rasuul Bawlos wuxuu si geesinimo leh ugu sheegay inuu dhaqankiisu ahaa "mid qumman, oo xaq ah, oo eedla'aan leh" (2 Tesaloniika 2,10). Laakiin isagu ma uusan sheegan inuu qumman yahay. Hase yeeshe, wuxuu gaadhay himiladaas oo ku dhiirrigeliyey kuwa kale inayan u maleynin inay gaadhay himiladooda (Filiboy 3,12-15). Dhammaan Kiristanka waxay u baahan yihiin cafis (Matayos 6,12:1; 1,8 Yooxanaa 9) waana inay ku kortaa nimco iyo aqoon (2 Butros 3,18). Qudduusnimadu waa inay kordhaa nolosha oo dhan.
Laakiin qoduusnimadeenna laguma dhammayn doono noloshaan. Grudem wuxuu sharraxayaa: “Haddii aan qaddarinno in isdaahirinta ay ku jirto qofka oo dhan, oo ay ku jirto jirkeenna (2 Korintos 7,1: 2; 5,23 Tesaloniika), markaa waxaan aragnaa in quduusnimadu ayan dhammays tirnaan doonin ilaa uu Sayidku soo noqdo oo aan helno maydka sarakicidda cusub. » 6 Kaliya markaa waa laga xorayn doonaa dembiga oo dhan oo waxaan heli doonnaa jidh ammaanta leh sida Masiixu leeyahay (Filiboy 3,21; 1 Yooxanaa 3,2). Rajadaas darteed, waxaan ku koray quduusnimada annagoo is nadiifinayna (1 Yooxanaa 3,3).
Digniinta kitaabiga ah ee daahirinta
Wesely ayaa arkay xoolo-dhaqato u baahan inay ku dhiirrigeliyaan kuwa aaminka ah addeecda dhabta ah ee jacaylka. Axdiga Cusubi wuxuu ka kooban yahay waano badan oo caynkaas ah, waana sax in la wacdiyo. Waa sax in anchor dabeecad ujeeddo jacayl iyo ugu dambeyntii gudaha
Midnimadayada aan la leenahay Masiixa iyada oo loo marayo Ruuxa Quduuska ah oo ah isha jacaylka.
In kasta oo aan sharfi karno Ilaah oo aan garwaaqsanno in nimcadu ay tahay inuu ku bilowdo dhammaan dhaqankeenna, haddana waxaan sidoo kale ku soo gabagabeyneynaa in nimcadan oo kale ay ku jirto quluubta rumaystayaasha oo dhan oo waxaan ku boorinaynaa inay ka jawaabaan nimcadan.
McQuilken wuxuu bixiyaa ficil ficil ah halkii laga furi lahaa qaab khiyaali ku dhisan.7 Ma ku adkaysanayo in rumaystayaasha oo dhami ay leeyihiin khibrado la mid ah xagga daahirintiisa Wuxuu u dooday himilooyin sare, laakiin isaga oo aan saadaalin kaamil ah. Dhiirrigelinta uu u adeego sida natiijada dhammaadka quduusnimada ayaa wanaagsan. Wuxuu xoojinayaa digniinta qoran ee ku saabsan riddada halkii lagu soo koobi lahaa gunaanadka fiqi ahaaneed ee ku saabsan adkaysashada quduusiinta.
Adkeynta ay u leedahay iimaanku waa mid caawimaad leh maxaa yeelay iimaanku waa aasaaska Masiixiyada oo dhan, iyo iimaanku cawaaqib la taaban karo ayey ku yeelan karaan nolosheena. Habka koritaanku waa wax la taaban karo: salaadda, Qorniinka, wehelnimada, iyo isku-kalsoonaanta loo maro tijaabooyinka. Robertson wuxuu Masiixiyiinta kula dardaarmayaa inay koraan oo ay marqaati furaan iyaga oo aan buunbuunin baahiyaha iyo rajooyinka.
Masiixiyiinta waxaa lagu booriyay inay noqdaan waxa ay yihiin ka dib bayaankii Eebbe; lama huraan raacaan tilmaanta. Masiixiyiintu waa inay ku noolaadaan nolol quduus ah maxaa yeelay Ilaahay wuxuu ku dhawaaqay inay quduus yihiin oo loogu talagay isticmaalkooda.
1 RE Allen, ed. Qaabka loo yaqaan 'Concise Oxford Dictionary of English' ee hadda jira, daabacaaddii 8aad, (Oxford, 1990), bogga 1067.
2 Axdiga Hore (AT) waa u qumman yahay xagga Ilaah, oo magiciisu quduus yahay oo isaguna waa qoduus (waxay dhacdaa in kabadan 100 jeer wadarta). Axdiga Cusub dhexdiisa (NT) waxa loo adeegsaday "quduus" si ka badan Ciise marka loo eego aabaha (14 jeer ayaa ka badan saddex jeer), laakiin inta badan maskaxda ayey ku badantahay (sagaashan jeer). Axdigii Hore Axdigii Hore wuxuu tilmaamayaa dadka quduuska ah qiyaastii 36 jeer (Wadaadiyayaal, wadaaddada iyo dadka), badiyaa laxiriira xaaladdooda; Axdiga Cusubi wuxuu tilmaamayaa dadka quduuska ah qiyaastii 50 jeer. AT waxaa loola jeedaa meelaha quduuska ah qiyaastii 110 jeer; NT kaliya 17 jeer. AT waxaa loola jeedaa waxyaalaha xurmada leh qiyaastii 70 jeer; Axdiga Cusubi kaliya seddex jeer oo ah muuqaal u ah dadka quduuska ah. Axdigii Hore Axdigii Hore wuxuu ka hadlayaa waqtiyada quduuska ah 19 aayadaha; Axdiga Cusubi weligiis ma yiraahdo waqti muqadas ah. Marka laga hadlayo meelaha, waxyaabaha iyo waqtiga, quduusnimadu waxaa loola jeedaa xaalad loo qoondeeyay, oo aan ahayn anshax akhlaaqeed. Labada dardaaranba, Ilaah waa qoduus, quduusnimaduna xaggiisa ayay ka timaadaa, laakiin sida ay qoduusnimadu dadka u saamayso waa kala duwan tahay. Muhiimadda Axdiga Cusub ee ku saabsan quduusnimada ayaa tilmaamaysa dadka iyo dhaqankooda, oo aan loo eegayn xaalad gaar ah oo loogu talagalay waxyaabaha, meelaha iyo waqtiyada.
3 Axdiga Hore gaar ahaan, daahirinta macnaheedu maahan badbaadada. Tani waa wax iska cad maxaa yeelay waxyaabo, meelaho iyo waqtiyo sidoo kale waa la quduus dhigay, oo kuwanuna waxay la xidhiidhaan reer binu Israa'iil. Adeegsiga ereyga "isdaahirin", oo aan loola jeedin badbaadada, waxaa sidoo kale laga heli karaa 1 Korintos 7,4: 9,13 - gaalnimada waxaa loo dhigay hab gaar ah qayb gaar ah oo loogu talagalay isticmaalka Eebbe. Cibraaniyada waxay adeegsanayaan ereyga "qoduus" si loogu tixraaco xaalad dhaqan ahaan hoos imanaya axdigii hore.
4 Grudem wuxuu xusayaa in dhowr meelood oo ka mid ah warqaddii uu u qoray Cibraaniyada, erayga "qaddarin" wuxuu u dhigmaa erayga "xaq" oo ku jira ereyada Bawlos (W. Grudem, Fiqiga habaysan, Zondervan 1994, p. 748, note 3.)
5 John Wesley, "Xisaabtanka Fudud ee Kaamilnimada Masiixiyiinta", ee ku jirta Millard J. Erickson, ed. Akhriska ku saabsan cilmiga Masiixiga, mugga 3, Nolosha Cusub (Baker, 1979), p. 159.
6 Grudem, bogga 749.
7 J. Robertson McQuilken, "Aragtida Keswick", Shanta Aragti ee Sanca (Zondervan, 1987), bogga 149-183.